Waa sidee in aad wax akhriska ku bilowda lixdan jir - BBC News Somali
Waa sidee in aad wax akhriska ku bilowda lixdan jir
Florence iyo asxaabteeda oo wax akhrisanaya
Bal sawiro adiga oo markii ugu horraysay ee aad wax akhriyi kartaa noqotay adoo 60 jir ah! Maxaa isbedel ah ee aad dareemi kartaa marka noloshaada intii badnayd adigoon akhriska aqoon aad adoo da'a barato?
Hadii aad qiyaasto saacad kasta inta goor ee aan qoraal ku helno xog iyo war, ee e-maillada iyo fariimaha telefoonka kuugu soo dhaca, waxa kugu adkaanaysa in aad sawirato sida noloshu noqon lahayd iyadoo aanad nasiibkaa lahayn.
Laakiin Florence Cheptoo, oo ku nool tuulo go'doon ah oo u dhaw magaalada Chesongoch ee dalka Kenya ayaa iyadoo 60 jir ah markii ugu horraysay wax akhris baratay.
Dariiqa ay u martay barashada qoralka iyo akhrisku wuxu bilaabmay mar ay aragtay gabadh yar oo ay ayeeyo u tahay oo dugsiga hoose dhigata oo buugaag iskuulka kala timaad.
Iskuulka ay inanta yari dhigan jirtay ayaa helay deeq buugaag ah oo ay siisay hay'adda caalamiga ah ee Book Aid oo buugaagta duugga Ingiriiska ka gurta oo u qaybisa dadka u baahan.
Laakiin waalidiin badan oo dhalay caruurta iskuulkaa dhigata ayaan qudhoodhu waxba akhriyi karin, waxaanay macalimiintii iskuulku go'aansadeen in ay dadka waaweyn qudhooha akhriska iyo qoraalkaba baraan.
Florence oo su'aalo qoraal ah oo BBC-du u dirtay jawaabahooda u soo marisay qofka haya makatabadda iskuulkaa ayaa sheegtay in "dareentay in ay ka mid noqotay dadka dunidan casriga ah ku nool".
Waxay sheegtay in berigii ay yarayd aan cidina iskuul ku darin, taasina sabab u ahayd in ay noqoto qof aan waxna akhriyin waxna qori karin.
Waalidkeed berigaa waxay doonayeen in ay nin u dhisaan oo yarad ka qaataan iyo in ay xoolaha u jirto markay yarayd.
"Waalidkay qiimo uguma fadhiyin aan wax bartaa" ayay tidhi
Dhibtaada haysatayna waxay ahayd in aanay magaceedu meel uu ku qoran yahay garan karin oo aanay waxba akhriyi karin, si fudud na u qori karin.
Haatan Florence akhriskay baratay waxaanay is barbar dhigtaa farqiga ku dhexeeya markii hore iyo haatan.
Waxay akhriyi kartaa waxa ku qoran dawooyinka loo qoro, waxay akhrisataa wargeysyada oo waxay ka war haysaa dunida inteeda kale dukumentiyadeedana iyadaa haysata.
Waxay sheegtay arimo gaar ah oo ay aad uga heshay oo ah markii ugu horraysay ee ay akhriday buugaag sheekooyin ah iyo waraaqo ehelkeeda iyo asxaabteedu u soo direen, waxaanay sheegtay in ay haatan kitaabka Baybalka akhrisan karto.
Waxa kale oo u furmay duni cusub oo ay khariidadaha ka barato. "waxaan jecelahay in aan barto dalalka kale ee dunidu meelaha ay ku kala yaalaan" ayey tidhi, waxaanay dhawaan soo qaadatay buug ku saabsan cilmiga beerahaha oo ay tidhi "waxaan ka baranayaa sida beeraha loo qoto".
Marka caruurta ay ayeyda u tahay natiijada imtixaanaadkooda ay ka soo qaataan iskuulka, way garan kartaa halka ay marayaan haata.
Waxay sheegtay in wax akhrisku siiyey kalsooni cusub oo ay dareento in ay sidii ay berigii hore ahaan jirtay ka aqoon badantahay, oo ay halkeeda ka dhiiban karto kolka dadku isku yimaadaan.
"waxaan awoodaa in aan kala saaro waxa u san iyo waxa u xun bulshada" ayey tidhi
Florence ma aha qofka ugu da'da weyn ee waxbarashada dadka waaweyn qaatay.
Waxa jira nin sideetan jir ah, aragiisu wuu liitay oo run ahaantii ismuu lahayn wax baad akhriy kari doontaa, laakiin wuxu macalimiinta u sheegay in ujeedadiisa ugu weyni tahay in fasalka uun lagu dhex arko isagoo fadhiya si ay fariin ugu noqoto dadka kale ee tuulada ku dhaqan oo ay ugu dhiirradaan in ay qoraalka iyo akhriska bartaan.